Kule minyaka, abaculi be- R & B kunye ne- hip-hop baye bajoyina amandla ukuvelisa iingoma ezithile ezimangalisayo. Nangona umgca phakathi kweendlela ezimbini zivame ukuphazamiseka namhlanje, i-gritty, idolophu ye-hip-hop kunye neengoma ezigqithisileyo ze-R & B zingadibana kunye nomzila owodwa kunye neziphumo ezingenangqiqo.
Abaculi beentlobo zombini bahlala bebambisana nabanye, kodwa ezinye ii-duos zisebenza ngcono kunezinye. Le yinto ekhunjulwayo, iingoma asiyi kuze siyibale, kunye neentshukumo eziguqule umculo wanamhlanje.
"Ndiza Kukho Kuwe / Yonke Okufuneka Ndiyenze Ngayo" yona nto ibhetele kakhulu xa kuthethwa intsebenziswano. Idibanisa ndawonye iinkwenkwezi ezimbini ezikhanyayo, iMod Man, owenza igama lakhe kunye neWu-Tang Clan , kunye noMary J. Blige kuphela .
Ingoma yakhululwa ngo-1995 kwi-albhamu ye-Method Man ye-studio ye-start, "It's." Ngokukhawuleza kwanyuka kwiitshathi, ukushaya iNombolo 3 kwiBillboard Hot 100 kwiinyanga ezimbalwa zokuqala. Kwi-Grammys ka-1996, ithatha ihlonipho ephezulu yeNtsebenzo yeRip Rap Rap ngeDuo okanye iqela.
Kutheni le nto isengumdaka oshisayo emva kweminyaka emininzi? Akukho nto ithemba ngayo italente yowomculi kunye nokuzisa abo babini bekunye kuphela. Izwi le-Blige eligqithisayo elidibanisa i-1968 ethi "Yonke into endiyifunayo ukuba ndiyenze" kunye neendlela zokuLungiswa kweMod Man's as timeless as it's.
"Ayikho i-Diggity" yenye yeklasi kulolu hlobo, kwaye isetyenziswe isigaba sokubambisana okungenakubalwa okuza kulandela. Ungayidlulisela njani ityune edibanisa i-Blackstreet, Queen Pen, kunye noDkt Dre ?
Ukusuka kwi-albhamu yaseBlackstreet "Enye iNqanaba," le nto yayiyi-hit hit, i- Billboard Hot 100 kunye nezinye iikopi emhlabeni jikelele. Kwathatha i-Grammy, ngeli xesha ngo-1997, kwi-R & B Duo kwaye yangena kwi-Nombolo 32 kwiingu-100 zeVH1 zika-Greatest Songs.
Lo mxube wezitawu wawungenakwenziwa ngcono. Isitayela se-rap yesigqirha sikaDkt Dre sidibene ne-Blackstreet yeR & B. Zifake emigqeni embalwa ngo-Queen Pen, kwaye kuzalwe i-hit eyokuthanda iminyaka emininzi.
Omnye umthombo ukususela ngo-1996, esithi "Masihambe" ugcwele i-funk. Lo uvela kwi-albhamu ye "House of Music" nguTony! Toni! Toné! kunye neempawu ze-DJ Quik. I-combo ngokuqinisekileyo yiletha i-funk emthonjeni, kwaye kukho nantoni encinci esuka kwi-Nirvana "Intsundu Njengomoya Wentsha."
Unokwazi ukubona iphethini apha: Iip duos eziphambili ze-Rap-R & B zaphuma ekupheleni kwe-90s. Ngomxholo wokutsala kunye nokuvula ngokukhatywayo "ohs" yaseLauuryn Hill, omnye umzekelo omhle wokubambisana kweRP / R & B ufumaneka "Ukuba Ndiyidumise Ihlabathi (Khawucinge Ngelo)." Kukhutshwa ngo-1996 ku-Nas '"Kwabhalwa" i-albhamu, i-groove yale ngoma iya kutshitshisa nabani na apho kufanelekile.
Enye yeengoma zomculo zendlu, "Ikhaya Lodwa" ukusuka kwi R. R. album "R." Ingoma eya kubanjwa entloko yakho, kwaye yinto enhle kakhulu. Oku kutshatyalaliswa kukuthi isignesha ehamba phambili kunye ne-sexy R. style style, kunye ne-rap kaKeith Murray inokubetha kakhulu. Sekunjalo, masingakulibali ukuba ilizwi elivela kumntu ovela kwi-Kelly Price. Ugcina ukugeleza kushukunyayo kwaye kusikhumbuza ukuba 'sidlale ebusuku.'
I-Smooth ayifuni nokuqala ukuchaza "Undithobile" kwi-albhamu yeRoots "Izinto zehla." Ingoma engummangaliso wengqungquthela kodwa yenza kakuhle, njengazo zonke iinjongo zivelise ngaphezu kweminyaka. Isitayela seqela lilungelelwano lwendalo kunye ne-R & B yentsebenziswano, kunye no-Erykah Badu noEva kumxube owenziwe ngokugqibeleleyo. Ngaphezu koko, ufanele uxabise nayiphi na ingoma nomfazi waseTopiya kwibali.
Ingqungquthela yaseMariah Carey yasekuqaleni "Fantasy" ayinanto kwi-remix ene-Ol 'Dirty Bastard (ODB). Ukumngenisa kumxube wenza umhlaba wohluke kwaye wongeza isitayela esiluhlaza kumculo womculo womculi we-pop. Kukho enye i-remix, i-"Bad Boy Mix" eveliswe nguSean Combs, kodwa ayikho ndawo kufuphi ne-funk ye-ODB version, yingakho abantu bathanda eli lifanelekileyo.
Ukuba "Ndiza Kulahleka U" akayi kudonsa kwiintliziyo zakho, khangela i-pulse yakho. "Wayengumkhuhlane" uTata "ngeli xesha, kodwa lo ngumqondiso uSean Combs. Inkokhelo kumhlobo wakhe uChristopher "I-Notorious BIG" iWallace nje inyanga emva kokubulala kwakhe ayiyibaleki.
I-albhamu isetyenziselwa ingoma ukususela kwi-1983 ethi "Zonke i-Breath You Take" yiPolisa. Amazwi anjengeendaba ezilungileyo-ngo-Faith Evans ayibeka ngokungafihliyo ngokuphakama kwemvakalelo efunyenwe kwezinye iingoma ezimbalwa. Akumangalisi ukuba oku kuye kwaba ngumvuzo kwabanye abaninzi abaye balahlekelwa ngengozi kwiminyaka ukususela.
Ukuba ukhangele intsimbi, "Ayikwazi ukuyikhanda" inokukufunayo kuphela. Le ntonga ibanjwe nguFustolous yayise "albhamu yakhe yeGhetto Fabolous" kwaye, nangona wayengumtsha welo xesha, liphikisana naluphi na uluhlu lwabalandeli bezilwanyana kuleluhlu. Lo uphawulekayo kuba umxube we-Fabolous 'East Coast hip-hop kunye ne-Nate Dogg yaseWest Coast vibe, kwaye isebenza ngokucacileyo kakuhle, mhlawumbi ibe bhetele kunanoma yimuphi omnye unqulo lwayo.
Omnye uWu-Tang Clan wezilwane, u-Ghostface Killah uqobo lwakhe "konke endikufumanayo nguwe" kwakuyimpumelelo yangoko. Ukuzisa uMary J. Blige kulo mva, i-rap-things-was-tough rap ne-ultra-smooth-track-track. Kusenokwenzeka ukuba ikhutshwe ngo-1995 (i-"Ironman" i-albhamu), kodwa ayinasiphelo kunye nebali apho abantu abaninzi banokuziqonda. Umzabalazo uyaqhubeka uninzi, kwaye le ngoma isathetha ngokubanzi.
Iinjongo ziyakuthanda ukubonisa abanye abaculi. Ngeli xesha ngumculi we-funk-gospel-hip-hop uMqq Soulchild. Ivela kwi-albhamu ethi "Phrenology", "Phula Ukhuphe" ingoma ehlaseleyo kuleluhlu, kunye neRoots 'classy raps exhaswa ngamazwi aphucukileyo eR & B. Kuyinto emnandi kwaye ayilibaleki.
U-Jay-Z washesha waba yinkwenkwezi ngokukhululwa kwe-albhamu yakhe yokuqala "Ukungaqiniseki Ngokuqiqayo," kwaye le ngoma yanceda ukuba iphumelele. Mhlawumbi akazange akhathaze ukuba wazisa uMahokazi weR & B, uMary J. Blige, ukuba acule i-chorus, nokuba. Lo unalo isitayela esinzima sokuthi uYay-Z waziwa, kwaye ugcino oluthile luvela "kuKumkanikazi" luyithatha phezulu.
I-Big Boi esuka e-Outkast ithathe isabelo sayo se-"Songboboxx "i-albhamu kwixesha elikhulu xa ekhankanya" Indlela Ohamba Ngayo "nge-Sleepy Brown. Kuyamnandi, kushushu, kwaye ngokuqhelekileyo kubonwa njengenye yeengoma ezilungileyo kakhulu kule minyaka yokuqala elishumi leminyaka. I-Sleepy Brown izisa ilizwi le-Motown-elifana ne-Rap Boi yokukhawuleza ngokukhawuleza, kwaye oko kwenza ukuba le ngoma ixhomekeke kwaye ayifani nayiphi na into eluhlu.
Ingoma enengxabano, kunzima ukulibala uYadakiss '"Kutheni?" ekhishwe kwi-albhamu yakhe ethi "Kiss of Death". Imibuzo ayicelayo kwisitayela sakhe sasekudala esikolweni se-hip-hop ngokuqinisekileyo i-politiki kwaye ijikeleze yonke into esuka kwiziyobisi ukuya ekuhlaselweni kukaSeptemba 11. Nangona ezinye iingcali ziye zathatha i-chorus kwiindawo ezahlukahlukeneyo, i-original ye-soulfighter Anthony Hamilton ibonakala iyona nto ibhetele.
Kwakhona kwi-albhamu yabo ethi "Phrenology", i-Roots iilethe iCody Chestnutt kwi-single single "Imbewu (2.0)." Ingqungquthela yezitayela ezithembela kwiChestnutt 'rock' kunye nemvelaphi yomphefumlo, kwaye yinto enhle. Ngokungafani nantoni na enye ingoma oye uyiva kwi-Roots, "iMbewu 2.0" idlalwa ngokuba ngumphefumlo we-psychedelic, kwaye yinto yokuhlola i-hip-hop enokukhishwa kuphela ngeliqela labaculi abanetalente.
I-10 ye-Ariana Grande Iingoma eziphezulu
Iimpawu zeNkampani ezinkulu zeMculo zelizwe
Aba-10 abaDlwengula abaSetyhini
I-All-Time Best Rap kunye ne-Hip Hop Duos
I-Top 10 ye-Latin Pop Songs
Iingoma ezili-10 eziphezulu zikaDavide Bowie
Yintoni iFree Breeze?
Ingqwalasela ye-Christaller yeCentral Place Theory
Inkcazo yekota "iThrojani iThrojani"
Ngaba i-Fix-Flat-Flat yiMveliso engozini?
UkuPhatha kweeNgcaciso kunye noHlololo
Ukugcina iiLwandle eziPhilile
IiNtlekele Ezibi Kwezizwe
Ngaba uRhulumente waseMelika uthenge i-30,000 Guillotines? Hayi.
Iindaba Eziziwayo Ngamadoda nakwabesifazana ukusuka kwiGrike Mythology
I-Pickett yeTyala kwi-Gettysburg
I-Top 5 ye-Chainsaw Mills